Ebee ka ịnọ nchebe karị na ọkụ ọgbụgba? | Netwọk Mgbasa Ozi
Ebee ka ịnọ nchebe n'ebe ọkụ ọgbụgba?
Portillo nke German | | Nkewa, Ihe gbasara ihu igwe
A na-ekwukarị na ọkụ nwere ike ịkụ gị ma ọ bụ azụ shark rie gị karịa ịme lọtrị. Ọ bụ obere mmejọ anyị ma ọ bụ na nsogbu ndị ahụ dị elu. N'aka ozo, ihe puru omume anyi merie lotiri karia ka anyi na egwu. N'otu aka ahụ, ihe gbasara nke puru omume na àmụmà ahụ na-ada anyị o buru ibu dabere na anyi no n’etiti oke ikuku.
Ọ bụ ya mere m ga-eji gwa gị banyere ebe kacha dịrị nchebe ma dịkwa egwu tupu ọkụ agba. Basicfọdụ isi ndụmọdụ maka adọta ụzarị ọkụ ma nwee ike ịghara ịhụ ebe ọ bụ na n'ọnọdụ ndị a anyị achọghị ịbụ onye protagonist.
Ndụmọdụ dị mkpa iji zere ịbụ onye ọkụ ọgbụgba na ịbụ onye ọkụ latrik bụ bụ nguzo nguzo. Nke ahụ bụ, ikwesighi ịpụ iche na mpaghara ndị ọzọ ka ha ghara ị mata anyị. Lightning na-emetụ ebe ndị ahụ na-enweghị ike iguzogide. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na iju mmiri mmiri n'etiti ubi, adala ma ọ bụ zoo n'okpuru osisi. Ọ bụrụ na ubi ahụ dị larịị, osisi ndị ahụ kachasị elu, ya mere ọ dị o yikarịrị ka ọ ga-adaba n'ime osisi. Ọ bụrụ na ị bụ ugwu kachasị elu n'ọhịa, nwee obi ike na bọọlụ ndị àmụmà ga-akụ bụ nke gị (ọ ka mma ịtụ vootu maka lọtrị, kwenye m).
1 Ebe ndị dị nchebe site na àmụmà
2 Ebe ndị dị egwu tupu ọkụ agba
Ebe ndị dị nchebe site na àmụmà
Otu n'ime ebe kachasị dịrị nchebe ịgbaba pụọ ​​na àmụmà bụ .Gbọ ala. Ọ dị obere na ọ bụ ebe kachasị nchebe, mana o sina dị. N'ihe atụ gara aga, ọ bụrụ na oké mmiri ozuzo juru anyị anya n'etiti ubi ahụ, ihe kachasị mma bụ ịba n'ụgbọala anyị wee mechie windo ya. N'ihi mmetụta "Faraday onu", nke na-eme ka ọkụ eletrik na-awụpụsị n'elu mpempe igwe mpụga ma ghara imetụta ime ahụ, anyị ga-enwe nchebe pụọ na ujo eletrik.
Nke a bụ ihe na-eme ma àmụmà tụọ ụgbọ ala. Ime dị nchebe
Ebe ọzọ dịtụ mma ọ bụ ụgbọelu. N’agbanyeghi ka o siri yie ihe ịtụ n’anya, ụgbọelu ahụ nwere ike ịnọ n’enweghị nsogbu ọ bụla site na àmụmà. Ihe ndị ahụ e kwuru na mbụ “ngịga Faraday” metụtakwara ụgbọelu. Osisi a na-ada, na-ekesa na fuselage niile ma na-aga n'ihu na ala na-enweghị emetụta ndị njem. Kedu nsogbu dị n'okwu ndị a? Ọfọn, dị mfe, anyị anọghị na ala, ma ọ bụrụ na àmụmà na-emetụta akụrụngwa n'ime kokpiiti, mgbe ahụ ụgbọelu ahụ ga-enwe nsogbu ma ọ ga-ada ngwa ngwa o kwere mee.
Ebe ndị dị egwu tupu ọkụ agba
Ruo ugbu a, anyị ekwuola banyere ebe kachasị nchebe ebe anyị nwere ike nọrọ n'oké ifufe na-enweghị ahụhụ ọ bụla. Ma enwerekwa ebe ndị dị nwekwuo ike ma dị egwu maka oke ifufe ahụ na na ha agaghị ala azụ ịchụ gị ma ọ bụrụ na ha achọta gị n'otu n'ime ebe ndị ahụ.
Ebee mgbe, ma ọ dịghị mgbe, ị kwesịrị ị na mgbe oké mmiri ozuzo bụ na osimiri, ọdọ mmiri ma ọ bụ ugwu. Abụọ ndị mbụ doro anya: mmiri na-eduzi ọkụ eletrik. Echere m na ihe ezi uche dị na ya bụ ịpụ na mmiri na ọnọdụ nke oke ikuku ọkụ. Gbọ mmiri na-adịkarị ebe dị egwu mgbe oke ifufe na ebili mmiri. Gbọ mmiri ahụ bụ ihe kacha pụta ìhè n'oké osimiri, ya mere, nhoputa nke onye mmeri nke ray nke afọ ahụ ga-abụ maka oche ma ọ bụ ndị njem nke ụgbọ mmiri ahụ. Ọchịchị Golden akpọburu aha ya abụghị ka ọ pụọ iche na ndị ọzọ. Mee ka ndị ọzọ pụọ iche n’ebe ị nọ, n’okwu a, asọla asọmpi. Agbanyeghị, taa a na-achịkwa nke ọma, ebe ọ bụ na ejiri ụgbọ mmiri niile nwee usoro mkpanaka na isi ụlọ.
Banyere ugwu ọ bụkwa ihe ezi uche dị na ya na anyị na-eri nri n'ihu àmụmà. Ọ dị ezigbo mkpa ịchọta ọnọdụ ihu igwe tupu ị gawa ije ma ọ bụ ịrị ugwu. Ozo anyi na etinye iwu olaedo, n’elu ugwu anyi ga-ama ama na amuma mmiri gha erute anyi n’enwe nfe.
Giraffes kachasị mma na savannah n'ihi ya, ọ na-adịkarị mfe ịmụrụ ọkụ.
N'ụlọ ị ga-akpacharakwa anya. Ọ bụ ezie na ọ bụ ebe kasị dịrị nchebe, ọbụna na ụgbọ ala, anyị ga-emechi windo. Ọtụtụ ọkụ ọgbụgba na-eso usoro ikuku, ma ọ bụrụ na ụlọ gị nwere windo abụọ mepere emepe na nnukwu akwụkwọ, ọkụ nwere ike isi na windo banye na nke ọzọ. Ọ bụrụ na n'oge njem ya ọ hụrụ gị, ọ ga-agafere gị n'echeghị echiche nke abụọ.
Yabụ site na ndụmọdụ ndị a ịkwesịrị ịdị njikere zuru oke iji zere egbe ọkụ mebiri gị. Mee ka lọtrị nwee ike karịa àmụmà, ọ dị gị n’aka.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ebee ka ịnọ nchebe n'ebe ọkụ ọgbụgba?
Igwe ojii nwere ike ịkọwa ihe omimi nke Bermuda Triangle
Ihu igwe phobias dị